トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Na fametrahana pachinko modely ny efi-trano dia matetika Xintai, na matetika latabatra
Manerana ny firenena be dia be ny pachinko efi-trano, fa Xintai sy toeram-pivarotana fivarotana sy nampiasa latabatra eo afovoany no ivon'ny, misy isan-karazany ny pachinko parlors. Ny endri-javatra vaovao ao amin'ny milina dia matetika ny pachinko efi-trano, miorina ao amin'ny toerana somary mora mpanjifa nivory, ianao no nanangana ny hoe manakaiky ny mifaninana fivarotana be dia be. Xintai dia, satria afaka maka vola goavana, ary toy ny varotra ary ny aizim-tombony tsy amin'ny lafiny sasany ho antoka ianao, dia lasa tena sarotra. Raha te-hampahafantatra ny
Xintai in be dia be, dia Xintai ny andro maromaro ny teny fanolorana, ny mihoatra noho izany Xintai modely hafa dia ao amin'ny fanarenana milina. Izany hevitra izany, dia tombon-dahiny an'i Xintai dia matetika ny pachinko trano izy. Xintai tao amin'ny efitrano fandraisam-bahinin'ny pachinko ny foibe, raha te-hilalao afa-tsy Xintai, heveriko fa tsara kokoa ny handeha hilalao ny fotoana izay rehefa afaka andro vitsivitsy avy ao amin'ny teny fampidirana Xintai.
Amin'ny ankapobeny, dia matetika Xintai mpankafy, tsena ho ambony-nampidirina any amin'ny faritra Note! ?
Raha tsorina dia, raha te ho ambony fampidirana ny Xintai ao amin'ny faritra, raha tsy ho afaka namely ihany amin'ny fivarotana ny Xintai, dia fivarotana maro mihevitra fa tsy misy ilaina ny hanafaka ny hanelingelina payout. Na izany aza, ny fe-potoana lava ao an-malaza modely, raha te-hitombo ao amin'ny tena-famantarana modely ny fivarotana, dia azonao atao ny hanokatra. Amin'io faritra io, dia niakatra ho any amin'ny hevitra ny fitantanana.
ary raha ny lafin-javatra ao amin'ny sehatra ampiasaina matetika ny pachinko efi-trano, dia tsy azo atao ny mifaninana sy ny toeram-pivarotana akaiky dia suburban fivarotana, heveriko fa lehibe mpanjifa fototra dia tapaka foibe. Hasiako be dia be nampiasaina sehatra, pachinko efi-trano ny mpanjifa taona fototra dia somary sosona no misy ao amin'ny fironana avo. Xintai vao haingana dia, ny ady sy ny karazana latency mety fiovaovana, sns, fa misy maro sarotra modely, dia ho maz?na no tokony hohalavirina. Raha
ny latabatra ampiasaina, toy izany ihany koa no nekena Xintai ny mpanjifa fototra mba menatra, dia azo inoana fa ny hitsangana eo amin'ny varotra. Raha izany no mitranga, dia tsy misy antony tokony hanery ny fampidirana ny milina vaovao. Ao amin'ny tany manodidina ny pachinko parlors, indrindra fa tsy be dia be ny mpanjifa ny fikorianan'ny ka nampitombo ny varotra, sarotra kokoa noho ny anoloan'ny toeram-pivarotana amin'ny gara. Izany hevitra, nampiasa andian-tsoratra, Xintai fandaniana ihany koa raha oharina amin'ny mora kokoa, fa tsy raha ny famerenana ny vola mora ihany koa Manarana ihany koa ho zavatra. Koa satria
Xintai dia nataonareo be dia be, satria ny famerenana dia tsy mametraka toka mafy nampiasa jiro, tsy misy zava-misy fa ny vola mikoriana tsy ho izany mafy. Rehetra dia tapa-kevitra ny pachinko toerana fivarotana sy ny mpanjifa fototra sy ny fivarotana varotra politika. Nandritra, fa mety koa ho pachinko efitrano fandraisam-bahinin'ny vola mikoriana mafy, dia toy izany efi-trano pachinko, heveriko fa raha vao ny tapa-kevitra azo atao raha mijery ny toe-payout sy ny fantsika fanitsiana.
amin'ny alalan'ny hisakanana ny voalohany nampiasa vola lany amin'ny latabatra, toy ny fivarotana ny politika ny fampihenana ny payout ny ny olona tao, ny politika fitantanana dia ho tsara kokoa ny mieritreritra fa misy ihany ny isan'ny Pachinkoya.
koa indrindra tany Moyen-?ge hahajanona eo Xintai, pachinko parlors izay tsy hiteraka ny baolina ho amin'ny fampidirana ny andro voalohany, heveriko fa ny fomba famerenana dia mety hieritreritra fa mafy fivarotana. Mijere eo ho eo, nampahafantatra ny andro voalohany dia toy ny Xintai, fivarotana be loatra hanenjanany hombon'ny Barker no kely. Pachinko fivarotana ny karazana na pachinko zavatra efi-trano dia ny handeha hiaraka aminao, azafady miezaka ny hanamarina.